ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဆုတောင်း
သူ..... ဘယ်လိုနေရာမှာ သီချင်းတွေ ဆိုနေမလဲ..!!
သူ..... ဘယ်သူတွေနဲ့ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေလေမလဲ..!!
သူ့..... မိသားစု မောင်နှမတွေ သူသိပ်ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့.... ...!!
Michael ရေ.. ရှင်ပဲ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးနဲ့ သီဆိုခဲ့ပြီးကွယ်.. I'll Be There.... တဲ့လား..!!
အခု... ကျွန်မတို့ ပြန်မေးပါရစေ... ရှင်ဘယ်မှာလဲကွယ်...!!
ရှင့်အနုပညာကိုချစ်တဲ့... ရှင့်ကိုချစ်တဲ့... ရှင်ကသိပ်ချစ်တဲ့... တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရှင့်ပရိသတ် ကျွန်မတို့တွေအားလုံး ချမ်းမြေ့တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံမှာပဲ ရှင်ရှိနေမယ်လို့ ယုံကြည်နေပါရစေ...
ကျွန်မတို့အားလုံး နှမြောတသ ချစ်ခြင်းများစွာနဲ့ ဆုတောင်းရင်း ကိုယ်စီ မျက်ရည်တွေ ဝဲနေကြပါတယ်...။
အချိန် 10:20 AM
တီငယ်...မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် အတွက် ၀မ်းနည်း နေတာလား..ဒီလိုပါပဲ..တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ..ရှေ့ကသွား..ကိုယ်လဲ နောက်က လိုက်ရမှာပဲ..။ အရင်က သူ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်ပေမယ့် သူ့ရုပ်ကို မကြိုက်ခဲ့ဘူး..ခုလို ဆုံးသွားတော့လဲ..သူ့လို လူတော် တစ်ယောက်အတွက် ၀မ်းနည်းမိပါတယ်..။
သူ သီချင်းတွေ ဆက်ဆိုနေမယ် ထင်ပါရဲ့
ညံ့တယ်ပဲပြောပြော တီငယ်ရေ မိုက်ကယ်က ဘယ်တုန်းက ဆုံးသွားတာလဲ..လုံးဝကိုမသိဘူး..
Heal the world သီချင်းရယ် Remember the time သီချင်းရယ် နားထောင်ပြီးကတည်းက သူ့ သီချင်းတွေကို စွဲလမ်းခဲ့တာပေါ့။ အမ်တီဗွီထဲက Remember the time နဲ့ Black or White ကိုလည်း အသေကြိုက်ခဲ့တာ။
ဟုတ်တယ် အစ်မရေ ဒီနေ့မနက်ပဲ အဲဒီသတင်းလေး ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ..........
အနုပညာတာဝန်တွေကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့
သတင်းကို အင်တာနက်ပေါ်က ဖတ်လိုက်ပြီးကတည်းက စိတ်ထဲမှာ တော်တော်မကောင်းဖြစ်တာပါ..
ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပါတယ်ခင်လေးရေ။ ဒီနေ့သူ့သတင်းတွေဖတ်ရတော့ အံ့သြလိုက်တာလေ။ သူကောင်းကင်ဘုံမှာ သီချင်းဆိုရင်းပျော်နေမှာပါ။
Heal the world နဲ့ You're not alone ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး နားထဲ ကြားနေတယ်ဗျာ...
ခုမှ သိတာ .. သူဆုံးမှန်း တကယ် မသိဘူး ...
မှတ်မှတ်ရရ သူဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေ ထဲကဆို အားကစားကွင်းထဲမှာ ကလေးတွေနဲ့ အတူ ဆိုထားတဲ့
Heal the world ကိုတော့ တော်တော် အမှတ်ရနေမိတယ် ... သူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနိုင်ပါစေ ..
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ သူသေဆုံးသွားပေမယ့် သူ့သီချင်းလေးလိုဘဲ I'll Be There!!!! ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း ဒီသတင်းကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လူတော်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့။ အရာအားလုံးဟာ အချိန်တန်ရင်တော့ အားလုံးပြီးဆုံးကြရစမြဲဘဲ မဟုတ်လားဗျာ။
သေမင်းက ဘာkingမှ မရွေးဘူးကိုး...
့မြန်မာ့ မင်းသားကြီး နဲ့ မိုက်ကယ်ကြောင့်
သံဝေဂ ရမိတယ် အမှန်ဘဲ..
မြန်မာ့မင်းသား နဲ့ ကိုမိုက်ကယ်
တို့ ကြောင့် သံဝေဂ ရမိတယ် ဦးဦးနော် ရေ..။
"we are the world" တယောက် going into the earth ဖြစ်သွားပြီပေါ့....
ဦးနော်၊ လေးငယ်နဲ့ ကလေးလေးတို့ဆီကို မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီသိလား။ ကိုးနတ်ရှင်ရယ်၊ မီးရယ် မကောင်းလို့လေ။ ဒီနေ့ ပို့စ်တွေအများကြီးဖတ်သွားပေမယ့် ဒီမှာပဲ ခြေရာချန်ခဲ့တယ်နော်။ မိုက်ကယ်ကြီးအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းပါ။
ဒါပေမယ့်လေ အမှိုက်ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်မိပြီး မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။
ဦးနော်နဲ့ လေးငယ်တို့ ငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေ ဖတ်ပြီးတော့လည်း ပျော်မိတယ်။
လေးငယ်ရဲ့ အရေးအသားကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ပြီး ကြည်နူးမိတယ်။
ကလေးလေးရဲ့ အရေးအသားကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်သို့ ရောက်ပြီး ဝင်မွှေသွားပါသည် .. မိုက်ကယ်ကြီး အတွက်ကတော့ ဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း
He is my favorite singer. I really feel sorry for this news.
ခုထိ နှမြောနေတုန်းပါပဲဗျာ။ =(
မိုက်ကယ့်ကို အဆုံးထိ လိုက်ပို့နေကြတာလား...
တွေ့ဆုံပြီးရင် ခွဲခွါခြင်းလာမယ် ။ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်မယ် ။ ပိုင်ဆိုင်ပြီးရင် ဆုံးရှုံးရမယ် ။ မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေပါ ။ နားလည်ခံစားတတ်ကြပါစေ ။